Isetshenziselwani i-Ultrasonic Extractors? - UHielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Ayini ama-Ultrasonic Extractors asetshenziselwa?"
I-ultrasonic extractors iyithuluzi eliphakeme uma kuziwa ekuqiniseni izinqubo ze-ultrasonic yezizinda. Njengendlela engavamile, i-sonication ivimbela ukungcoliswa kwezinto ezishisa ukushisa (isib. Amavithamini, flavour, antioxidants, CBD njll). Ukusetshenziswa kwamagagasi amakhulu aphezulu anamandla kubangela ukuthi i-perforation nokuphazanyiswa kwamangqamuzana nama-tishu futhi kukhuthaze ukudluliselwa kwamandla. Lokhu kusho ukuthi impahla ye-intracellular (okungukuthi izinto ezihlosiwe) ikhishwa esitokisini sangaphakathi futhi idluliselwa ku-solvent. Isizinda se-Ultrasonic siqinisa inqubo yesikhamo eholela ekuvuneni okuphezulu, izinga eliphakeme lokukhipha kanye nokucubungula okusheshayo. Ngesikhathi esifanayo, isizinda se-ultrasonic yisimo semvelo-friendly, indlela eluhlaza.
Funda kabanzi mayelana nokuthi indodanaication ingathuthukisa kanjani inqubo yakho yokukhipha!